Tag discrimination in the workplace - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » Tags » discrimination in the workplace
Guide to Help Businesses Embrace LGBT+ Equality in Myanmar
မေ 21, 2020 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
This guide will help employers in Myanmar avoid discrimination and navigate complex issues of sexual orientation, gender identity and expression (SOGIE) – and their Myanmar vocabulary – to build an inclusive workplace.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိသည့် မတူကွဲပြားမှုရှိသော၊ လေးစားမှုရှိသော အားလုံးအကျုံးဝင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ကို မည်ကဲ့သို့ တည်ဆောက်မလဲ။
မေ 13, 2019 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
မေလ(၇)ရက်နေ့တွင် MCRB အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ ပြည်တွင်းပြည်ပ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအား မတူကွဲပြားမှုများအား လေးစားမှုရှိသည့် အားလုံး အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး လက်တွေ့အကြံဥာဏ်များ ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခု ကျင်းပခဲ့ပါသည်
LGBTI များအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရန် ကုလသမဂ္ဂ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများ
ဧပြီ 30, 2019 in ရင်းမြစ်များ
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် (LGBTI) များအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း နယ်ပယ်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးရုံး၏ Free and Equal Campaign မှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအတွက် ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေးအထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) မှ ၎င်း၏ “မသန်စွမ်းသူများအား အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း လက်စွဲစာအုပ်” အတွက် အကြံဥာဏ်များတောင်းခံခြင်း
ဒီဇင်ဘာ 03, 2018 in ရင်းမြစ်များ
MCRB နှင့် ILO တို့မှ မသန်စွမ်းသူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မြှင့်တင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှ သက်ဆိုင်သူများ ပါဝင်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ Rose Garden ဟိုတယ်တွင် ၂၁ရက်နေ့၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၁၇ခုနစ် တွင် ကျင်းပခ
မြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် လုပ်ငန်းခွင်၌ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအားတိုက်ဖျက်ခြင်း အနှစ်ချုပ်စာလွှာ ထုတ်ဝေ
စက်တင်ဘာ 07, 2017 in ရင်းမြစ်များ
လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အလုပ်ခန့်ထားမှုတို့၌ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီများကို အကူအညီပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး အနှစ်ချုပ်စာစောင်တစ်စောင်ကို မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန် မှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန(MCRB)က ယနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ
Consultation Held on the Discrimination and Business in Myanmar Briefing Paper
ဇွန် 15, 2017 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
On 9th June 2017, MCRB heldaconsultation in Yangon to receive feedback and engage in discussion on the draft Discrimination and Business in Myanmar Briefing paper.
မသနျစှမျးသူမြား အခှငျ့အရေးနှငျ့ စီးပှားရေး မဟာဗြူဟာမူကွမျး အပျေါ မှတျခကျြပေးပို့ရနျ မွနျမာ့စီးပှားရေးကဏ်ဍတာဝနျယူမှုရှိရေး အထောကျအကူပွုဌာန (MCRB) တောငျးဆို
အောက်တိုဘာ 31, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
၂၀၁၆-၁၈ကာလအတှငျး မွနျမာနိုငျငံရှိ မသနျစှမျးသူမြား ယုံကွညျမှု ပွညျ့ဝစှာဖွငျ့ လုပျငနျးခှငျဝငျရောကျနိုငျရနျနှငျ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားတှငျ ပါဝငျဆောငျရှကျနိုငျရနျ မွနျမာ့စီးပှားရေးကဏ်ဍ တာဝနျယူမှုရှိရေး အထောကျအကူပွုဌာန ( MCRB)သညျ မဟာဗြူဟာမူကွမျးကို ရေးဆှဲထား